၇ ခုဒီဂျစ်တယ်မျက်နှာပြင်၏အားသာချက်များ - လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသခြင်းဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်များ
မှတ်ချက်များကိုအဘယ်သူမျှမ ဒစ်ဂျစ်တယ် Display ကို၏7အားသာချက်များ surPosted in, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ် Par Clemပုံနှိပ်ထုတ်ဝေ ၂၀၂၀ မေလ ၂၇ ရက် ဇွန်လ 18, 2021
၃။ software ရွေးချယ်မှုများ
6. တစ် ဦး ကပြောင်းလဲနေသော display ကို
သင်၏စီးပွားရေးကိုပြသရန် Digital Display ကိုသုံးရန်တွန့်ဆုတ်နေဆဲလားသို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အခြားနည်းလမ်းများကိုရှာဖွေလိုပါသလား။ ထိုအခါဤဆောင်းပါးသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အား Digital Display ၏အားသာချက် ၇ ခုကိုအဆိုပြုထားပါသည်။ သို့မှသာ ပိုမို၍ လက်လှမ်းမီသောဤနည်းပညာအသစ်ကြောင့်သင့်ကိုဘာကြောင့်လှည့်စားမနေပါသနည်း။
Easy Multi Display တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏စီးပွားရေးကဒ်ပြားများပုံနှိပ်ခြင်း၊ သင်၏စီးပွားရေးကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်လက်ကမ်းကြော်ငြာများပုံနှိပ်ခြင်း (သို့) SEA (Search Engine Advertising) ကြားတွင်ကြော်ငြာခြင်းသည်အလွန်စျေးကြီးနိုင်သည်ကိုသိရသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ကြော်ငြာခြင်းကုန်ကျစရိတ်သည်အလွန်စျေးကြီးနိုင်သည်။ Digital Signage ဖြင့် hardware နှင့် software အတွက်သာပေးရမည်။ (သင်တွင်ကောင်းသောဆော့ဝဲလ်ရှိရန်လိုသည်။ သင် Easy Multi Display အကြောင်းပိုမိုသိလိုပါကဤဆောင်းပါးနှစ်ခုကိုဖတ်ရန်သင့်အားအကြံပြုပါသည်။
"Easy Multi Display သည်အဘယ်ကြောင့်အကောင်းဆုံးဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သနည်း။"
"Easy Multi Display ၏အဓိကလုပ်ဆောင်ချက်များမှာအဘယ်နည်း။).
မျက်နှာပြင်အကြောင်း, Conseil Supérieurက de l'Audiovisuel (ပြင်သစ်နိုင်ငံ၏အလယ်အလတ်မီဒီယာကိုထိန်းညှိရန်အတွက် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သောပြင်သစ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု) ပြင်သစ်အိမ်ထောင်စုတစ်ခု၏ဖန်သားပြင်အရေအတွက်သည် ၅.၅ ခန့်ဖြစ်ပြီးနှစ်စဉ်တိုးပွားလာသည်။ မယုံနိုင်စရာလား။
သို့သော်ဖန်သားပြင်အရေအတွက်မှာအိမ်များသာမကအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါတိုးပွားလာသည်။ သင်၏ကလေးများ၊ သင်၏ခင်ပွန်းသို့မဟုတ်ဇနီးတို့နှင့်အတူစျေးဝယ်စဉ်ကြော်ငြာဖန်သားပြင်များကိုသင်မြင်တွေ့ခဲ့ရသည်မှာသေချာသည်။ မြှင့်တင်ရေးကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အချိန်အများစုမှာဤဖန်သားပြင်များ။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည်၊ ဖန်သားပြင်များသည်ဈေးသက်သာပြီးစျေးနည်းသည်။ ယခုတွင်သင်သည်အလွန်စျေးပေါသောဖန်သားပြင်ကိုရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သတင်းအချက်အလက်ပိုလိုချင်ရင် Cnet ကနေအရမ်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဆောင်းပါးကိုလွတ်လပ်စွာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။တီဗီများသည်ယခင်ကထက် ပို၍ စျေးသက်သာသလော။".
ကွန်ပျူတာ၏စျေးနှုန်းသည်သင်လုပ်ချင်သောအရာပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်စျေးနှုန်းမှာယူရို ၁၅၀ နှင့်ယူရို ၁၀၀၀ ခန့်ဖြစ်သည်။ Easy Multi Display ကိုယူရို (၁၄၉) နှင့် (၁၀၀ ယူရိုမှ ၈၀၀ ကြား) အထိရနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဖြေရှင်းချက်အပြည့်အ ၀ အတွက်စျေးနှုန်းမှာယူရို ၄၀၀ မှ ၃၀၀၀ ကြားကြားသာရှိသည်။
Easy Multi Display တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတိုင်းသည်ထူးခြား။ ကွဲပြားခြားနားပြီးကိုယ်ပိုင်သမိုင်းရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ဒါဆိုမင်းရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဝိသေသလက္ခဏာကိုရနိုင်မယ့်အခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ဘယ်လိုတူမလဲ။
ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမြှင့်တင်ရန်သင်၏စတိုးဆိုင်တွင်ဖန်သားပြင်တစ်ခုထားလိုပါသလား။ ထို့နောက်မိုးလုံလေလုံစနစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပါ။ သင်၏စတိုးဆိုင်ပြင်ပရှိအလားအလာရှိသောအာရုံကိုဆွဲဆောင်လိုပါသလား။ အဘယ်ကြောင့်တစ် ဦး ပြင်ပစနစ်ကမရွေး? သငျသညျနှစ်ခုအကြားတှနျ့ဆုတျ? ထိုအခါ Semi- ပြင်ပစနစ်ရွေးချယ်ပါ! အဘယ်ကြောင့်ဤရွေးချယ်စရာသုံးခုအတူတကွမရွေး?
ဒီဂျစ်တယ် display စနစ်နဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့သင့်အတွက်မရှိတော့ပေမယ့်ဒီဂျစ်တယ် display စနစ်ကသင့်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။
အင်တာနက်သည်အိမ်တွင်းတွင်လည်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးအကျိုးဆက်အားဖြင့်စျေးကွက်အတွင်းရှိဆော့ဖ်ဝဲလ်အရေအတွက်တိုးများလာခဲ့သည်။ ပြင်သစ် ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အဆိုအရ ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင် developer ၁၉ သန်းရှိခဲ့ပြီဖြစ်ရာယင်းသည်ပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သည် silicon.fr၂၀၃၀ ပြည့်နှစ်တွင်ဒီနံပါတ်သည် developer သန်း ၄၀ ရှိရမည်။ ထို့ကြောင့်သင်လိုအပ်သောဆော့ဝဲကိုသင်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားဒီဂျစ်တယ်ဆိုင်းအင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုအကြံပြုနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားသင်အားအကြံပြုလိမ့်မည် လွယ်ကူစွာခင်းကျင်းပြသ ဘာကြောင့်လဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလိုက်တာကဒီဆော့ဖ်ဝဲဟာအင်အားအရှိဆုံး၊ အပြည့်စုံဆုံးနှင့်စျေးကွက်ထဲတွင်ဈေးအပေါဆုံးသောတစ်ခုဖြစ်သည်။
Digital Signage ဖြင့်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကင်ပိန်းကိုနာရီအနည်းငယ်၊ မိနစ်ပိုင်းအတွင်းတွင်ပင်စီစဉ်နိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးသည် Easy Multi Display ကဲ့သို့သောမျက်နှာပြင်တစ်ခု၊ ကွန်ပျူတာနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်တွင်ဤအရာသုံးခုရှိပါကသင်ပြရန်ပစ္စည်းရှိပြီးဖြစ်သည်။
ယခုသင်၌အကြောင်းအရာလိုအပ်သည်၊ ဤသည်မှာအလွန်လျင်မြန်သောနေရာ ဖြစ်၍ သင်၏ထုတ်ကုန်များ၊ ဗွီဒီယိုများကိုဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းသို့မဟုတ် Photoshop သို့မဟုတ် Gimp ကဲ့သို့သောဆော့ဝဲလ်ဖြင့်ဓာတ်ပုံပုံဖော်ခြင်းများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏မကြာခဏသုံးစွဲသူများအတွက်အကြောင်းအရာများကိုလျှင်မြန်စွာနှင့်အလွယ်တကူဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည့် Canva.com ကိုကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏအသုံးပြုသည်။ ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်အားကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ သင်၏ကြော်ငြာကိုတစ်နေ့တာ၊ သင့်ဖောက်သည်များနှင့်သင့်ဆန္ဒများနှင့်အလျင်အမြန်လိုက်လျောညီထွေစွာပြုပြင်နိုင်သည်။
သင့်အတွက်ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းနာများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိသလား။ မင်းမှာပန်းချီဆရာ၊ ဗီဒီယိုအယ်ဒီတာတွေ၊ စာရေးဆရာတွေသူငယ်ချင်းတွေရှိသလား။ သင်သည်သူတို့၏အလုပ်များကိုသင်၏ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ပြသခြင်းအားဖြင့်သူတို့၏အလုပ်များကိုရှေ့သို့တင်နိုင်သည်။ သူတို့သည်သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ပြီးသင့်ဒေသရှိအနုပညာရှင်များကိုတင်ဆက်နိုင်သည်။
Easy Multi Display ဖြင့်ရုပ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများ၊ စာသားများနှင့်အနည်းငယ်သောကလစ်များဖြင့်ပြသနိုင်သည်။
Digital Display မှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သင့်အားပြိုင်ဘက်များထက်အားသာချက်များစွာရနိုင်ပြီးအလားအလာကောင်းများကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ခံစားနိုင်မှာပါ။ သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုဗွီဒီယိုမှတစ်ဆင့်တိုက်ရိုက်တင်ပြနိုင်သည့်အခါသင်၏စတိုးအသွင်အပြင်တွင်အဘယ်ကြောင့်စက္ကူကြော်ငြာကိုပြပါသနည်း။ သင်သည်သင်၏အလားအလာများကိုမျက်ခြည်မပြတ်စေရန်သေချာစွာလုပ်နိုင်သည်။
မျက်လုံးကိုဆွဲဆောင်ခြင်းအပြင်သင်သည်သင်၏ထုတ်ကုန်ကိုတိုက်ရိုက်တင်ပြပြီးဖောက်သည်ကိုဖြစ်နိုင်ခြေများကိုအသိပေးလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ထုတ်ကုန်သည်ဖောက်သည်ကိုစိတ်ဝင်စားပါကသူသည်၎င်းကိုပိုမို ၀ ယ်လိုလိမ့်မည်။
သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုသာအဘယ်ကြောင့်တင်သွင်းရသနည်း။ လမ်းလျှောက်သူများကိုကူညီရန်သင်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်စနစ်ကိုသင်ထားနိုင်သည်။ သူတို့ကိုဘယ်လိုကူညီရမလဲ။ နေ့စ်၏သတင်းကိုလမ်းလျှောက်သူများကိုသတင်းပို့ရန်သင်၏စတိုးအသွင်အပြင်တွင်သတင်းချန်နယ်တစ်ခု၏တိုက်ရိုက်စီးဆင်းမှုကိုပြသပါ။ ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်၊ မြို့ပြမြေပုံ၊ ဘတ်စ်ကားအချိန်ဇယားများကိုလည်းသင်ပြနိုင်သည်။
သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမည်မဟုတ်ပါ။ တောင်းဆိုနေတဲ့လယ်ယာမှတ်သားထားတဲ့ *